Gbasara Anyị | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Lọ Akwụkwọ Oakleigh & Early Early Intervention Center na-elekọta ụmụaka afọ 2 - 11 bụ ndị nwere nnukwu nsogbu mmụta na mkpa siri ike. Ndị bi na ya gụnyere ụmụaka nwere mkpa ndị ọzọ, dị ka anụ ahụ ma ọ bụ ihe mmetụta uche, yana ụfọdụ ụmụaka na Autism Spectrum.
Gaa njem nlegharị anya nke ụlọ akwụkwọ Oakleigh
Childrenmụaka ndị bịara ụlọ akwụkwọ Oakleigh nwere Mmụta, Ahụike na Nlekọta Nlekọta ebe Ndị Isi Obodo kpọgoro ụlọ akwụkwọ anyị aha. Iji hazie nleta, biko kpọọ ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na 0208 3685336, nhọrọ 0. Biko lee nke anyị Iwu Mbanye.
Maka Acorn Admission biko lee nke anyị Oge mmalite ngalaba
Organizationlọ Akwụkwọ .lọ Akwụkwọ
Lọ akwụkwọ Oakleigh na-enye ụmụaka nwere nsogbu mmụta siri ike ma sie ike. A haziri klaasị n'ime usoro nke isi (na ọnọdụ pụrụ iche nke a nwere ike ịgbanwe) ma kesaa ụmụaka iji wepụta usoro izi ihe pụtara ìhè iji gboo mkpa ha.
Oakleigh nwere nnukwu ndị ọrụ gụnyere ndị nkuzi nwere ọgụgụ isi na ndị nwere ntụkwasị obi, ndị na-enyere ndị na-enyere aka aka ịmụ ihe, ndị nlekọta nri oge, onye njikwa saịtị, ndị ọrụ nchịkwa na ndị na-akwado ICT bụ ndị ndị ọkachamara ndị ọzọ na-akwado (lee Ndị Nlekọta Ahụike na Ahụike, Otu Ndị Nkwado Ezinụlọ). Ndị otu ọrụ niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na e mezuru ihe kacha mma maka ụmụaka anyị niile.
Chart Nhazi nke Oakleigh School (PDF Akwụkwọ)
Chaatị nhazi nzukọ Acorn Assessment Center (PDF Akwụkwọ)
Childrenmụaka nwere ike ịga ụlọ akwụkwọ dị na mpaghara nke ndị ọrụ Oakleigh na-akwado ma anyị na-anabatakwa ndị ọgbọ anyị na ụlọ akwụkwọ maka ịnweta ohere dị mma na obodo.